04 Aug 2021२० श्रावण २०७८, बुधबार
विश्वमा झन् बढ्यो कोरोना, कतै तेस्रो, कतै चौथो लहरको त्रास सप्तरीमा एक युवकको रहस्यमय अवस्थामा शव फेला फेरी माओवादीमै फर्किइन् विमला ओली ! बेलायतमा कोरोनाबाट हुने मृत्यु फेरि बढ्यो १२७ किलो गाजाँ र ट्रकसहित तीनजना पक्राउ डोटीमा भाइरल ज्वरोको बिरामी बढे
उपत्यकाको अझै दुई साता निषेधाज्ञा थपिने, निर्णय गर्न बैठक बस्दै
2021-07-15 12-07 | Hamro Biratnagar
निषेधाज्ञा आदेशबारे निर्णय गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बस्ने भएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमखु जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकाको आगामी निषेध आदेशको मोडालिटी तय गर्ने छ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले उपत्यकामा १५ दिन निषेध आदेश थप गर्नेगरी छलफल हुने बताए। उनले आज दुई बजेपछि आफूहरूबीच निषेध आदेशका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिए।
निरौलाले बैठकमा लामो दूरीका यातायात खुला गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए। 'नागरिकले निकै सास्ति पाइरहेका छन्। अब लामो दूरीका यातायात पनि सञ्चालन गर्ने हो कीरु अहिले पनि विभिन्न बहानामा लामो दुरीका सवारी सञ्चालन भइरहेका छन्। लामो दूरीको सवारी सञ्चालन अन्य जिल्लाहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेकोले के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिने छ', उनले भने।
यसअघि थपिएको निषेध आदेशको अवधि आज मध्यरात १२ बजेबाट सकिन लागेसँगै त्यसबारे निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको हो। उपत्यकाको निषेध आदेश केही खुकुलो गरिए पनि शैक्षिक संस्था, फिल्म हल, पार्टी प्यालेस, जिम घरलगायत बन्द रहेका छन्।
सप्तरीमा एक युवकको रहस्यमय अवस्थामा शव फेला
फेरी माओवादीमै फर्किइन् विमला ओली !
१२७ किलो गाजाँ र ट्रकसहित तीनजना पक्राउ
दुई किलो सुनसहित तीन जना पक्राउ
प्रदेश नं १ मा गएको वर्षभन्दा बढी रोपाइँ
बेलायतमा कोरोनाबाट हुने मृत्यु फेरि बढ्यो